Fedora ကို install ပြီးနောက် 19/20 | Linux မှ
Fedora 19/20 ကို install ပြီးနောက်
ကျွန်ုပ်၏ desktop PC များနှင့် laptop များတွင် Fedora ကို XFCE ဖြင့်အချိန်အတော်ကြာအသုံးပြုခဲ့ပြီး Debian ကိုကျွန်ုပ်၏ PC နှင့် laptop များတွင်လည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်၏ကုမ္ပဏီဆာဗာများတွင် CentOS ဖြင့်လည်းကောင်းအစားထိုးခဲ့သည်။
အရေးကြီးသည်မှာအပြောင်းအလဲတစ်ခုသည်ဆာဗာများ၌လိုအပ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါအခြားအလုပ်တစ်ခု (yum, configuration files etc ... ) ကိုအသုံးပြုရခြင်းကြောင့် PC နှင့် laptop ကို Fedora သို့အတိအကျပြောင်းခဲ့သည်။ XFCE ကငါ့အကြိုက်ဆုံးစားပွဲပေါ်မှာဖြစ်သကဲ့သို့: D.
ငါပြောရမှာက CentOS ရော Fedora နှစ်မျိုးလုံးဟာပိုးသားလိုပဲ။ CentOS ကိုဘယ်လို configure လုပ်ရမယ်ဆိုတာငါကတည်းကငါပြောခဲ့ပြီးပြီ။ ယခင်ပို့စ်များ ဒီတစ်ခါတော့ငါက Fedora ကိုအာရုံစိုက်လိမ့်မယ်၊ လူအများကကြောက်ကြတယ်။
ထို့အပြင် Fedora သည်နောက်ဆုံးပေါ်နောက်ဆုံးပေါ် linux distros များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် package အားလုံး၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းများမရှိခြင်းဖြစ်သော်လည်းလှိမ့်သောဖြန့်ချိသော distros များနှင့်မတူသည်မှာဤ packets များကိုလုံလောက်စွာစမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်၊ တလှည့်ဖြန့်ဖြူးအတွက်တ ဦး တည်း ..
XFCE ဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ Fedora ပုံအချို့:
နောက်ထပ် ado မရှိရင်, ရဲ့ရကြကုန်အံ့:
FFC ကို XFCE ဖြင့်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။
Fedora + Xfce (၃၂ ခု) Fedora + Xfce (၃၂ ခု)
RPMFusion repository ကိုကူးယူပြီး install လုပ်ပါ။
၄ င်းကို double click နှိပ်ပြီး install လုပ်ပြီး superuser password ကိုရိုက်ထည့်ပြီးအရာအားလုံးကိုလက်ခံသည်။
အောက်ပါအဆင့်များကိုစနစ်၏ root အဖြစ်လုပ်ဆောင်ရမည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ရန် terminal ကိုဖွင့်ပြီးရေးပါ -
(သင်၏ superuser စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ပါ)
(၎င်းသည်အီးမေးလ်ဂလိုင်းတစ်ခု၊ ဝဘ်ဘရောက်ဇာတစ်ခုနှင့်စာသားတည်းဖြတ်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ Firefox, Thunderbird နှင့် Libreoffice ကိုထည့်သွင်းတော့မည်ဖြစ်သောကြောင့်မလိုအပ်ပါ)
systemctl start sshd (ဝန်ဆောင်မှုစတင်သည်)
systemctl enable sshd (System startup တွင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုဖွင့်သည်။
hostname နှင့်စနစ်၏ host များကိုပြောင်းပါ (optional):
ကျွန်ုပ်တို့ထင်မြင်သည့်အရာကိုကျွန်ုပ်တို့စနစ် (ရှိစေလိုသော peter-xfce) အမည်ဖြင့်အစားထိုးပြီး CTRL + O ဖြင့်သိမ်းဆည်းပြီး CTRL + X နှင့်နီးသည်။
127.0.0.1 the_hostname_elected localhost :: 1 the_hostname_elected6 localhost6
127.0.0.1 ပီတာ -xfce localhost :: 1 ပီတာ -xfce6 localhost6
ငါတို့နှင့်အတူကယ်တင်သည် CTRL + O ငါတို့နှင့်အတူပိတ် CTRL + x
ပြီးတော့ voila .. ဒီနည်းနဲ့သူတို့မှာ Fedora ကိုယေဘုယျအသုံးပြုမှုထက်ပိုပြီးပြင်ဆင်ထားပြီးပြီဆိုတာလုံးဝမခက်ခဲဘူးဆိုတာကိုသူတို့တွေ့မြင်ခဲ့ပြီးပြီ။ D.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » Fedora 19/20 ကို install ပြီးနောက်
67 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
ပါပလော Honorato ဟုသူကပြောသည်
Fedora ကိုအမြဲတမ်းတပ်ဆင်ချင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့် GRUB ကို install လုပ်တဲ့အခါသူကကျွန်တော့်ကို kernel panic လုပ်ခဲ့တယ်။ ငါ loader ကို live ကနေ install လုပ်ထားပေမဲ့အဲဒါကိုဘယ်တော့မှအလုပ်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ငါ Fedora 20 နဲ့ဆကျဆံတော့မယျ။
Pablo Honorato အားပြန်ပြောပါ
Ubuntu Dior ကိုချစ်လား ဟားဟား။
ခင်ဗျားရဲ့ကိစ္စကိုထူးဆန်းတယ်။ ငါ linux ထဲမှာမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့တစ်ခုတည်းသော kernel panic Ubuntu ကအတိအကျရောက်လာတယ်။ Debian, CentOS, Fedora, Slackware, Arch နှင့် openSUSE on ဘယ်တော့မှမ on
အမှန်တရားကတော့ Fedora 18 ပထမလကကြောက်စရာကောင်းတဲ့ kernel panics ကိုပေးတယ်။ ၁၇ ကတောင်မရှိဘူး၊ fedora 17 ကတော့ပိုးနဲ့တူတယ်။
မင်းမှာဘယ် Mainboard အမျိုးအစားရှိလဲ။ သင်၏ motherboard နှင့် / သို့မဟုတ် processor သည် PAE ကိုမပံ့ပိုးပါကသင်ဝယ်ယူရန်လိုအပ်သည် (ယေဘုယျအားဖြင့်အများစုက၎င်းကိုထောက်ပံ့သင့်သည်) သင်ဝယ်ယူရန်လိုအပ်သည်။
၎င်းသည် ၂၀၁၀ လက်ပ်တော့ပ်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည် pae ကိုထောက်ပံ့သည်။
debato @ honato: ~ $ lspci -v
00: 00.0 Host bridge: Intel Corporation Core Processor DRAM Controller (Rev 02)
Subsystem: Samsung Electronics ကုမ္ပဏီလီမိတက် c581
အလံများ: bus master, fast devsel, latency 0
00: 01.0 PCI တံတား: Intel Corporation Core Processor PCI Express x16 Root Port (တည်းဖြတ် 02) (prog-if 00 [Normal decode])
ဘတ်စ်ကား: မူလတန်း = 00၊ အလယ်တန်း = 02၊ လက်အောက်ငယ်သား - ၂၊ ဒုတိယ - နောက်ကျ = 02
တံတားနောက်ကွယ်မှ I / O: 00002000-00002fff
အသုံးပြုမှု Kernel ကိုမောင်းသူ: pcieport
Kernel module တွေ: shpchp
00: 16.0 ဆက်သွယ်ရေးထိန်းချုပ်သူ - Intel Corporation5Series / 3400 Series Chipset HECI Controller (ပြင်ဆင်ချက် ၆)
အလံများ: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 43
fc805800 ရှိမှတ်ဉာဏ် (64-bit, prefetchable) [အရွယ်အစား = ၁၆]
အသုံးပြုမှု Kernel ကိုမောင်းသူ: mei
Kernel ကို module တွေ: mei
xfce ဟာ compiz နဲ့ဘယ်လိုလဲ။ ငါက glide အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်နှင့် minimize နှင့်တိုးမြှင့်ခြင်းရှိသည်ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ ဤအရာများသည်ကျွန်ုပ်အား fedora kde တွင်အသုံးပြုသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြစ်သည်။
Compiz သည်ကဲ့သို့ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ :) .. yum install compiz နှင့်လွယ်ကူစွာ install လုပ်နိုင်သည်
အလွန်ကောင်းသောကျူတို။ ဒါ့အပြင် CentOS ကိုသူကြိုက်သင့်တဲ့အတိုင်းအတာကိုခံစားရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
PS: ငါ Debian ကိုသုံးတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အနည်းဆုံးတော့သင်ဟာကျူးဘားရဲ့ဝေးလံခေါင်သီတဲ့နေရာတွေမှာတောင်အကူအညီတောင်းခံနေလို့ပါ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ Fedora မှာတစ်ယောက်မှမကူညီဘူး။ မင်းငါ့ကိုရယ်စေတယ် !! 🙂
Germán Racca အားပြန်လည်ပြောဆိုပါ
ငါသဘောတူတယ် .. ပိုက်ဆံအများကြီးအများကြီးရှိတယ်😀
ငါသိသည်အတိုင်း, Cubans နှင့်အမေရိကန်မှပိတ်ဆို့ခြင်းအခြားနိုင်ငံများမှသူတို့အားမကူညီကြဘူး။ ထို့အပြင် centos ထောက်ခံမှု null ဖြစ်ပါတယ်, အနီရောင် ဦး ထုပ်ထောက်ခံမှုပေးဆောင်ရသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် RHEL ၏ငွေပေးချေမှုကိုထောက်ပံ့သည်ဟုဆိုလိုသည်၊ သို့သော် CentOS ကိုထောက်ပံ့သည်။ နောက်ဆုံးသင်ထွက်ပေါ်လာသည့်သတင်းများ၊ ဝီကီနှင့်အင်တာနက်ပေါ်ရှိအချက်အလက်များစွာသည်သင် RHEL ဖြစ်ပါကသင်ပေးဆောင်ရမည့် .. ထို့ကြောင့်သုံးစွဲသူများစွာ CentOS သို့သွားသောကြောင့် ရပ်ရွာထောက်ခံမှုပေးသည်။ Fedora မှာလည်းအလားတူပါပဲ။ ထောက်ခံမှုသည်ရပ်ရွာဖြစ်ပြီး Red Hat ခေါ်ဆိုခစင်တာမဟုတ်ပါ။ D.
ငါပြောတာက Fedora ဟာသင်ပြောနေတဲ့တိုင်းပြည်ကလူတွေကိုမကူညီဘူးဆိုတာသက်သေပြနိုင်ဖို့ငါမင်းကိုစိန်ခေါ်ပါတယ်။ ခင်ဗျားဟာကြက်တူရွေးလိုပြန်လုပ်တာပဲ၊ အရာဝတ္ထုတွေအကြောင်းမသိဘူး၊ ပြီးတော့ရှင်သန်နေမှာမဟုတ်ဘူး။ ရွှင်လန်း!
ကျွန်ုပ်၏မှတ်ချက်သည်ကြာမြင့်စွာကတည်းကရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်းသင်လင့်ခ်များအတွက် href tag ကိုသုံးသောကြောင့်သင်ကောင်းစွာသတိမပြုမိပါ။
ဒီမှာပါ အဖွေ အပိုဆုနှင့်အတူပါဝင်သည်.
ဟားဟား…ဒါနဲ့ငါ့ဆီလာခဲ့လား။ ငါပြောတာကသူတို့ဟာအရာဝတ္ထုတွေကိုမသိဘဲကြက်တူရွေးလိုပြန်လုပ်ကြတယ်။ မင်းကိုမင်းရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုမင်းကိုပြောပြစေချင်တယ်၊ မင်းကမင်းတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုမင်းကိုပြောပြစေချင်တယ်။ ဘယ်သူပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်။ လုံးဝမှားယွင်းတဲ့၊ မှားယွင်းစွာတင်ပြတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုသူဘယ်သူ့ဆီကလာသလဲဆိုတာကိုငါယူတယ်။ အားလုံးလေးစားမှုရှိရှိနဲ့ခင်ဗျားတို့ဟာမင်းတို့ဟာလူတွေထက်ပိုစမတ်ကျတယ်လို့ငါထင်တယ်၊ သင်တို့နှစ် ဦး စလုံးအတွက်တစ် ဦး ကပွေ့ဖက်! 🙂
ကောင်းပြီလိုင်စင်သဘောတူညီချက်ထဲမှာ၊ အကယ်၍ သင် usa ဖမ်းဆီးရမိသောနိုင်ငံမှလာလျှင် irc ရုပ်သံလိုင်းမှလူများသည်သင့်အားထောက်ပံ့ရန်ငြင်းဆန်နိုင်သည်ဟုဆိုထားသည်။ အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်ကဘာပြောတာလဲဆိုတာကြည့်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။
Debian ပန်ကာ ဟုသူကပြောသည်
ပထမ ဦး ဆုံးသူဟာသူတို့ကို navos တွေနဲ့ဆက်ဆံပြီးဂျာမန်ကသူတို့ကိုဖက်လိုက်တယ်။
ထိုအ Fedora အားလုံးကို: exiti ရဲ့ Papa မရှိပါ !! Stamina debian, အရူးနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှု !!
PS: ပရိသတ်များသီဆိုကြသည့်စကားကိုနားထောင်ပါ။ "သင်က Red Hat beta-tester" "သင်၏အသိုင်းအဝိုင်းသည်ပုဂ္ဂလိကနိုင်ငံတစ်ခုနှင့်တူသည်" "Debian မြို့၊ Debian မြို့"
၎င်းသည် Fedora ဝီကီတွင်ရှိနေသည်၊ RH သည်ပိတ်ဆို့ခြင်းခံထားရသောနိုင်ငံများကိုမထောက်ပံ့နိုင်ဟုဆိုသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင့်ကိုယ်သင်စစ်ဆေးဖို့သင့်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ ငါမင်းကိုပန်ကာတုန့်ပြန်မှုမပေးပေမယ့်တကယ်တော့အဖြစ်မှန်ကဘာလဲဆိုတာကိုမင်းကိုပြောပြနေတယ်။ ငါ GNU / Linux ကိုငါနှစ်သက်တယ်။ ဒါကြောင့် distros များနှင့်အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်အားလုံး။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာကြီးအလုပ်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်စစ်မှန်။ မှန်ရမည်။ ကျွန်တော်မှတ်ချက်ပေးမယ်ဆိုရင်၊ ဘလော့ဂ်မှာတစ်ယောက်ယောက်ပြောတာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ပွေ့ဖက် !!
@ the debian ပန်ကာ:
ပထမ ဦး စွာမည်သူ့ကိုမျှမလေးစားခြင်း၊ ငါသည်ဤဘလော့ဂ်ယောက်ျားတွေနှင့်အတူကျန်းမာဆွေးနွေးမှုရှိခြင်းတယ်။
တတိယအချက် - ငါ GNU / Linux ကို Debian၊ Fedora စသည်ဖြင့်ကြိုက်တယ်။
နောက်ဆုံးပေါ်အတွေ့အကြုံကိုလိုချင်သောသူသည်သင်တုန်းထိပ်တွင်ရောက်ရန်မလိုဘဲ (Arch ကိုကြည့်ပါ) Fedora သည်အဆင်ပြေလိမ့်မည်။ ဒါပေမဲ့သင် ၁၀၀% တည်ငြိမ်မှုကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် RHEL / CentOS ကပိုကောင်းတယ်။
Debian တည်ငြိမ်မှု၊ စမ်းသပ်ခြင်း၊ CentOS နှင့် Fedora များကိုအသုံးပြုသောအခါကျွန်ုပ်ကိုကြည့်ပါ။ Fedora သည် ပို၍ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းထက် Debian စစ်ဆေးခြင်းထက် ပို၍ တည်ငြိမ်ကြောင်းပြောနိုင်ပါတယ်။
သငျသညျ၎င်း၏အားနည်းချက်များနှင့်အတူလှိမ့ distros ၏အလွန်အစွန်းသို့မပါဘဲအားလုံး packages များပေါ်တွင်မွမ်းမံမှုများရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကဒါဟာပြီးပြည့်စုံသော distro ဖြစ်ပါတယ် .. ..
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ် .rpm packages နှင့်အတွေ့အကြုံမကောင်းပါ၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်များသောအားဖြင့် Fedora ကဲ့သို့သော distros အချို့နှင့်ကွဲပြားမှုများရှိသည်။ ငါ Fedora ကိုစမ်းကြည့်ဖို့အားပေးလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ FedoraRussian ကိုသုံးမယ်။ ဒါ့အပြင်သူကပိုပြီးပြည့်စုံသောအထောက်အပံ့ (Skype, codecs, …) ရှိသည်။
စကားမစပ်၊ Slackware သည်တည်ငြိမ်မှုနှင့်ကိုင်တွယ်မှုအရည်အသွေးနှင့်ကျွန်ုပ်ကိုအထူးအံ့အားသင့်စေသည့် distro (မကြာခဏမွမ်းမံထားခြင်းမရှိသော်လည်းထူးဆန်းသည်မှာ Fackora နှင့်ဆင်တူသည် Slackware သည်)
ဤသည်အလွန်ကောင်းသော fedora, ငါအများဆုံးကြိုက်တယ်တစ်ခု kde နှင့်အတူရှိ၏။ gnome3 နဲ့ငါသိပ်မကြိုက်ဘူး။ Mate နှင့် compiz တို့ဖြင့်၎င်းသည်အနည်းငယ်တည်ငြိမ်မှုမရှိကြောင်းသတိပြုမိပြီး xfce နှင့်ကျွန်ုပ်ကောင်းစွာစမ်းသပ်ရန်လိုအပ်သည်။
သူတို့က mint, ubuntu နဲ့ opensuse လိုထူးခြားတဲ့အနုပညာလက်ရာများကိုလုပ်ခဲ့ရင်ကောင်းမှာပါ။ ငါ xfce ကိုငါနောက်ဆုံး install လုပ်တဲ့အချိန်မှာ peeling လုပ်နေတယ်လို့ထင်တယ်။ XD ပြီးတော့ငါစိတ်ကြိုက်ကိုမကြိုက်ဘူး၊ ငါပျင်းရိလို့မဟုတ်ဘဲငါဖန်တီးတာတွေကိုမကြိုက်ဘူး။ မဆိုအနုပညာရှင် XD လိုပဲ haha
Fedora က Eula မှာမင်းကိုမထောက်ပံ့နိုင်ဘူးလို့မပြောပါဘူး။ သင်ပြသသည်မှာသင့်အားပေးမည်မဟုတ်ပါ။ သင်က၎င်းကိုပြproblemsနာမရှိဘဲဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ပြီးကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သူမဆိုအပ်ဒိတ်များကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်သည်။ CentOS, Debian နှင့် distro တို့တွင်ဖြစ်ပျက်သည်။
Gee @ eliotime3000၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျူးဘား၏ဝေးလံခေါင်သီသောထောင့်တွင်နေထိုင်ပြီးကျွန်ုပ် Fedora ကိုဝတ်ဆင်သည်ဟုပြောသောအခါကျွန်ုပ်ကိုယုံကြည်ပါ။ ဒါဟာတစ်နေရာရာသူတို့ကဆီလျှော်သော X သို့မဟုတ် Y အကြောင်းပြချက်များအတွက်ငါ့ကိုမထောကျပံ့ပေးနိုငျကွောငျးကိုမှန်သည်, ဒါပေမယ့်ဒီခမ်းနား distro အသုံးပြုခြင်းမှငါ့ကိုတားဆီးမထားဘူး
ငါ Fedora ကိုသုံးတာ၊ သူတို့ပြောတာတွေကိုမသိဘဲစကားစတဲ့စကားတွေပြောတဲ့စကားကြောင့်သေသေချာချာမလိုက်နာတာကိုငါအရမ်းဝမ်းသာတယ်။ သင်အကူအညီလိုအပ်ပါက IRC (skytux) တွင်ကျွန်ုပ်ကိုရှာတွေ့ပြီးသင်ကူညီလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်သိပါက အခြား IRC လိုင်းများနှင့်အတူတူပါပဲ၊ မည်သူကမှသင့်အားမည်သည့်အရာကိုမဆိုငြင်းပယ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်တန်းမဟုတ်လျှင်၎င်းတို့သည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် / သို့မဟုတ်အလုပ်အကြောင်းများကြောင့်မရရှိနိုင်ပါ။ ပွေ့ဖက် !! 🙂
ဒီမှာအတူတူပါပဲ: D. ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်ဖြင့်မည်သူမဆိုကျွန်ုပ်ကိုအကူအညီတောင်းနိုင်သည်။ petercheco@hotmail.es
@petercheco: IRC on ပေါ်ရှိ Fedora လိုင်းများကိုဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းပါတယ်
Sooooo ကောင်းတဲ့ post … .. Fedora မှာဘယ်လို font ချောချောမွေ့မွေ့သွားတာလဲ။
ကောင်းပြီ၊ သင်ဖိတ်ကြားမှုတစ်ခုခုလုပ်ရန်လိုသည်သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်မှတ်ပုံတင်နိုင်သည်ကျွန်ုပ် link တစ်ခုအားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်😀
ဖောင့်ချောချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသည်။ livecd ကိုသာစမ်းကြည့်ပါ
IRC client ကို install လုပ်ပါ (XChat ကိုကျွန်တော်အကြံပေးပါ) Fedora channel များရှိရာ freenode server ကိုရိုက်ပါ။
ကျွန်တော်အကြံပြုသောစပိန်ဘာသာဖြင့်ချန်နယ်များမှာ # fedora-latam နှင့် # project-fedora ။
ပွေ့ဖက် !! 🙂
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်! ဒါကပုံမှန်မဟုတ်ဘဲနောက်ကွယ်ကမည်သူကိုမဆို distro, ၎င်း၏အသိုင်းအဝိုင်း, ကြီးသော, စေသည်။ ငါပြောသလိုပဲသူတို့ကိုငါကူညီရမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာငါ့ကိုနေ့တိုင်းလိုလိုတွေ့နိုင်တယ် http://gutl.jovenclub.cu .
Kudos !! @German နှင့် @petercheco
အသံနဲ့အတူပြhaveနာတစ်ခုရှိတယ်။ ဘယ် distro မှာ volume control နှစ်ခုလိုမျိုးလဲ။
စပီကာများကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုလျှင်၎င်းသည်% volume ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏နားကြပ်ကိုအခြား% အသံအတိုးအကျယ်ရှိလျှင်၎င်း၊ ကျွန်ုပ်နားကြပ်များကိုဖယ်ရှားပါက၎င်းသည်စပီကာများ၏% သို့ပြန်သွားသည်။
ငါ fedora ပေါင်း xfce ထည့်သွင်းပါ
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော Fedora အတွက် link များကို XFCE ဖြင့်ထားပါ။ ၎င်းသည်သူ့ဟာသူ install လုပ်မည်။
Windows Vista / 7/8 နဲ့ကျွန်တော်အဲဒီလိုဖြစ်ခဲ့တာ။ Linux မှာကျွန်တော်တစ်ခါမှမကြုံဖူးဘူး။
ငါ Arch ထဲမှာဖြေရှင်းပြီးသူတို့က alsa နဲ့ pulseaudio နှစ်ခုလုံးကို install လုပ်သင့်တယ်။ ဒါပေမယ့် fedora မှာငါမလုပ်နိုင်ဘူး။
ဟင့်အင်း၊ ကျွန်ုပ်သည် Fedora ကိုကြိုက်ပါသည်၊ မိနစ် ၃၀ ထက်နည်းသောအချိန်တွင်၎င်းသည် ၉၉% အလုပ်လုပ်နေပါသည်
မင်းနဲ့အဆင်ပြေပါတယ် Windows NT 6.X တွင် Realtek audio (ပုံမှန်အားဖြင့် PC များစွာတွင်ပါရှိသော) audio ဖြင့်တပ်ဆင်သည့်အခါများ၌ထိုကောင်းချီးပြblessedနာရှိသည်။
XFCE ပါသော Fedora တွင်ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုသာရှိသည်။ စပီကာနှင့်နားကြပ်နှစ်ခုလုံးအတွက်ဖြစ်သည်။
32 bit အတွက် iso link ကို 64 bit ထားတယ်။
Adobe repo ဖွင့်ထားခြင်းမရှိပါက flash-plugin ကိုသင်တပ်ဆင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ငါ post ကိုပြင်ဆင်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ငါမှတ်ချက်တွေထဲမှာ Adobe repos ထားခဲ့ပါနှင့် Fedora 64 bit link button အတွက် superuser ကနာမည်ပြောင်းမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် ..
Flash ကိုတပ်ဆင်ရန် Adobe repository ကိုတပ်ရမည်။
yum ထည့်သွင်းပါ http://linuxdownload.adobe.com/adobe-release/adobe-release-i386-1.0-1.noarch.rpm -y
yum ထည့်သွင်းပါ http://linuxdownload.adobe.com/adobe-release/adobe-release-x86_64-1.0-1.noarch.rpm -y
ပြီးရင် repos ထဲမှာ flash-plugin package ကိုတွေ့နိုင်တယ်
Debian တွင်၊ သင်က Flash Player Tarball ကို install လုပ်ပြီးသည်နှင့် run သည်နှင့်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးသည်နှင့်၎င်း command ကို အသုံးပြု၍ တည်ဆောက်ထားသောဗိသုကာပညာအပေါ် အခြေခံ၍ script ကိုပေးသည့် package တစ်ခုကိုသာ install လုပ်သည်။ အခမဲ့မဟုတ်သော activation သင်တန်း)
အကယ်၍ လူတ ဦး က၎င်းကိုမွမ်းမံလိုလျှင်အောက်ပါအချက်များလုပ်ဆောင်သည် -
ဟုတ်ပါသည်၊ သို့သော်သင် repos ကိုထပ်တူထပ်မံညှိရမည် (Contribution non-free ထည့်ပါ) ။ ဗားရှင်းအသစ်ထွက်ပေါ်လာသောအခါ Fedora တွင် repo ကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့် Fedora update command: yum update ဖြင့် update လုပ်သည်
ကောင်းပြီ retouching ကိုတစ်ကြိမ်သာပြုလုပ်ပြီး update ကို script ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ Flash plugin ကိုလည်း Adobe မှတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်သည်။
ငါ Fedora ကို KDE နဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာသုံးခဲ့ပေမယ့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာမှာ Fedora 19 နဲ့အတူစက်ကသိပ်သည်းလာပြီးနောက်ပြန်သွားရတယ်ဆိုတာကိုတော့ငါမသိဘူး။ အခုငါ Xfce manjaro နဲ့အတူရှိနေပြီ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဒရာမာထွက်လာပြီးငါ Fedora ကို Xfce နဲ့ထားတော့မယ်။ ဒါပေမယ့် Kwin ဟာ ၀ င်းဒိုးမန်နေဂျာတစ်ယောက်လို (ဒါကြောင့်ငါက Manjaro မှာရှိတယ်) ငါလိုချင်တာတစ်ခုတည်းပဲ Fedora မှာ dockbarx အလုပ်လုပ်နိုင်တယ်။
ဒီစက်ဟာ I5 2410M ဖြစ်ပြီး 4gb ram ပါရှိပြီး Intel 4500Hd ပါရှိပါတယ်
Juan Cruz ကိုပြန်ပြောပါ
Man, သူ့အရာက graphical tools တွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာပြသဖို့ပါ။ အကယ်၍ Fedora ကတကယ်တမ်းခက်ခဲတဲ့ distro xD လို့မထင်ရင်၊
Fedora နဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးမပြောထားတာကိုသူသဘောကျတဲ့အချက်တချက်ကတော့နက်နဲတဲ့ netinstall ရှိတဲ့ "nice" ကိုစဉ်းစားနိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းသော distro တစ်ခုပါ။ လျောက်ပတ်သောဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည် Wi-Fi မှတဆင့်ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီးများစွာသောပရိုဂရမ်များကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။ ငါလုံးဝ netinstall ကနေတဆင့် install လုပ်ဖို့အကြံပြုပါသည်။ သင်သည် livecd တွင်မပါသောပရိုဂရမ်များစွာကို install လုပ်ပြီးနောက် mega update ကိုသင်သိမ်းထားသည်။
နောက်ထပ်အကြံပေးချင်တာက russianfedora ၏အခမဲ့နှင့်အခမဲ့မဟုတ်သော repositories ကို install လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ Chromium, Flash, Sun Java, Opera စသဖြင့် package တွေရှိတယ်။ အရမ်းကောင်းတယ် လျှို့ဝှက်ကျောက်မျက်တစ်ခုလုံး
ထည့်သွင်းပြီးနောက် mega update နှင့်အတူတောင်မှသူတို့မြစ်ဝကျွန်းပေါ် packages များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Debian, Arch, Ubuntu စသဖြင့်ကြည့်ရှုပါ။
Fedora နှင့် CentOS live အသက်ရှင်နေထိုင်ပါ
ငါသုံးပြီး ငါ့ရဲ့ dell laptop ပေါ်မှာ Fedora , အရာအားလုံးအလွန်ကောင်းစွာသွားပြီ, ကမြန်ဆန်တည်ငြိမ်သည်နှင့်အမြဲတမ်းကွဲပြားခြားနားသောအစီအစဉ်များကို၏ updates များကိုရှိပါတယ်။
ငါ kernel ထိတ်လန့်ခြင်းနှင့်ပြproblemsနာများတစ်ကြိမ်သာကြုံခဲ့ရလျှင်မည်သည့်ဗားရှင်းကို ၁၇ သို့မဟုတ် ၁၈ ဖြစ်လျှင်မမှတ်မိပါ။ သို့သော် grub ကိုစစ်ဆေးပြီးပြင်ဆင်ပြီးနောက်၎င်းကိုကျွန်ုပ်ဖြေရှင်းခဲ့သည် (အသေးစိတ်မှာ၎င်းသည် mint နှင့် Windows တို့နှင့်အတူတူဖြစ်သည်) ။
တကယ်တော့ငါကပြန်လည် install လုပ်ဖို့ဗားရှင်း 20 ထွက်လာရန်စောင့်ဆိုင်းနေပါတယ်။
dockbarx ကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်ရမလဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အင်တာနက်ပေါ်မှာအရာတစ်ခုခုကိုတွေ့ခဲ့ပေမယ့်ကျွန်တော်မထည့်နိုင်လို့ပါ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါကြိုးစားပြီးအဲဒါကိုမတပ်ဆင်ခဲ့ဘူး၊ အဲဒါကသင့်အားမှီခိုမှုများကို quilombo တစ်ခုပေးသည်။
အလွန်ကောင်းသော distro နှင့် Gnome shell ကိုနှင့်အတူအကြီးအသွား။
ဒီနေ့မနက်မှာပဲ user agent ကိုစမ်းသပ်လိုက်ပြီ
ငါ Fedora 20 64bit desktop desktop ပေါ်မှာစမ်းကြည့်ပါ့မယ်။ ဒါက ubuntu နဲ့တခြားအရာတွေအတွက်ကောင်းတဲ့ရွေးချယ်စရာတစ်ခုပဲဆိုတာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။
Vala + Gtk3 အက်ပ်တစ်ခုကိုဖန်တီးခြင်း။ [အပိုင်းတစ်ပိုင်း]
လွန်ခဲ့သောရက်များအတွင်းကျွန်ုပ်တို့တွင် DNS ပြproblemsနာရှိသည်